Tag: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များ | Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၁၅ အောင်မြင်မှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများကိုမျှဝေခြင်း!
စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 2, 2016 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 3, 2016 Douglas Karr
wow ဘာတစ်နှစ်! လူအများစုကငါတို့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီး meh ကိုတုံ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ငါတို့မပျော်နိုင်ဘူး။ ဒီဇိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှု၊ ရာထူးများနှင့်ပတ်သက်သောအရည်အသွေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်း၊ ငါတို့ဘတ်ဂျက်မတိုးဘဲ၊ မည်သည့်အသွားအလာကိုမဆိုမ ၀ ယ်ပဲငါတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကအော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှုပဲ။ လွှဲပြောင်း spam အရင်းအမြစ်များမှအစည်းအဝေးများချန်လှပ်, ဒီမှာ